Sidee Qof Ugu Dhigi Kartaa Mid Ku Jeclaado? | Xaqiiqonews
Sidee Qof Ugu Dhigi Kartaa Mid Ku Jeclaado?
Ma aaminsantahay jaceylka in laga xakameyn karo? ma ka mid tahay dadka aaminsan hadii qof uusan ku jacleen in aadan ka dhigi karin mid ku jecel?
Jaceylku kama duwana dareenada kale ee sida maalinlaha ah aad u aragto tusaale
Hadii dareenada kor ku xusan oo dhan la xakameyn karo, waa macquul Jaceylka-maadaama uu ka mid yahay dareenada- waa la xakameyn karaa.
Sirta Ka Dambeysa In qof qof kale Jeclaado?
Inta aadan baranin qaabka qof looga dhigi karo in uu kuu qaado jaceyl waali ah, waxaad u baahantahay in aad ogaato sirta ka dambeysa “jaceylka”. , maya Jaceylku xiriir lama lahan sixir iyo biti, waa un xeerar nafsi ah oo qof walbo uu soo mara uu jecyl qaadayo.
Malaha in aadan ogeyn ayaa dhici karta, laakin adiga iyo qof walba oo dunida joogo waxaan leenahay liis maskaxdeena ku qoran, liiska aya waxa ku qoran astaamo, dabeecado iyo kiriteeriya gaar ah oo aad ka raadiso qofka ka hor inta aadan u qaadin jaceyl waali ah.
Sidoo Kale Aqri..Gabaryahey Sidee U Soo Jiidan Kartaa ragga?
Hadii dadka qaar aysan soo buuxin kariteeriyada liiska kugu qoran, waa sababta aadan u jaclaan ee aad uga dhigato saaxib caadi ah.
Midna ogow ma jirto xeer gaar ah oo aad isticmaali karto, kaasi oo kuu damaanad qadaya in lagu jeclaado, qormadani waxa ay ku baraneysaa sida loo sameeyo xeerar muhiim ah, ka dibna aad aragto wixii dhaca.
Mid ka mid ah xeeladaha lagu adoonsano qalbiga qofka waa in aad wanaajisaa qofka, hadii aan dhinac kale ka fiirino waxay dhahaan Jaceylku waa eray qabyo ah waxa uuna dhameystirmaa kaliya marka ay jirto “texgelin”.
2-Muuji baahi, adiga oo aan is bahdilin
Waan ogahay in aad tahay qof aan cidna u baahneyn, balse runtu waxa ay tahay qofka kale ee aad jaceylka ka rabto waxa uu u ka helaa in la dareensiiyo baahi.
Muhiimadu waa intaas, caawin weydiiso qofka laakiin ha calaacalin.
3-Iska qari qofka
Waxaa jirta marka ay dadku qof jeclaadaan waxa ay jecelyihiin in ay waqti badan la qaataan, hase yeeshee taasi xiriirka ma toosiso.
In aad bareeg qaadato waa arin u fiican caafimaadka, xitaa dadka is qaba, marka lagu waayo ayaa lagaa fikiraa, waxaan badanaa maqalnay “qorax marka ay dhacdo ayaa waxqabadkeeda la dareemaa.
4- Xumaantaada tus qofka
Waa qaladka ugu badan ay dadku ku dhacaa -aniga ka shakhsi ahaan dhowr mar ayaan khaladkan galay- markii aan rabno in aan qof soo jiidano kaliya waxa aan tusnaa dhinaca wanaagsan.
Xaqiiqadu waxa ay tahay dadku waxa ay ku jeclaan karaan oo kaliya marka ay ogaadaan xaqiiqda qofka aad tahay hadii hadda aad tahay qof kala kacsan oo xariif ah u sheeg qofka markii aad aheyd bataati, taasi waxa ay ka saacidi doontaa qofka in uu ogaado qofka aad tahay ka dib ayuuna ku qiimeynayaa.